« Folk & Roots » etsy amin’ny Piment Café
Fiarahana miavaka indray ity hiseho etsy amin’ny Piment Café Behoririka anio alina ity. «Folk & Roots », iarahana amin’i Fara Gloum, Tafaranitse ary Johnny Bass izany. Araka ny anarany, hifandimby ireo vazo an-gitara sy ireo trandraka manokana, hoentin’ireto mpanakanto ireto. Raha toa ka havanana kokoa amin’ny famerenana ireo hiran’olon-kafa i Fara Gloum, anisan’ireo mpitendry gitara nanaraka tarika maro kosa i Jhonny. Manana ny sanganasany ihany koa izy. Mpitsoka “saxophone”, ary mpanaraka mpanakanto maro ihany koa i Tafaranitse.
Jimmy B Zaöto, etsy amin’ny Trass
Nanome sehatra ny gitara beso, tamin’ny alalan’i Nully ny Trass Tsiadana, tamin’ny herinandro teo. Fantatra kosa fa homena laka indray ny amponga maroanaka, anio, manomboka amin’ny 9 ora alina. Hampiaina izany i Jimmy B Zaöto, anisan’ireo mpiangaly ny amponga maroanaka malaza sy mahay amin’izao fotoana izao.
Rija sy Solo etsy amin’ny Urban Café
Efa maromaro ny fiarahana, saingy maro hatrany koa ireo miandry sy manantena izany. Fantatra fa hiverina hifampizara sehatra indray i Rija Ramanantoanina sy Solo Andrianasolo, anio alina, etsy amin’ny Urban Café Antsahabe. Fampiarahana talenta mihitsy, satria sady samy mpihira no mpitendry izy mirahalahy ireto.
Tovo J’Hay any amin’ny Onyx
Mitohy hatrany ny “cabaret” ho an’i Tovo J’Hay. Fantatra fa hanafana ny sehatry ny Onyx eny Ivato indray ity mpanakanto ity, anio alina. Hamerina an-tsehatra ireo hira nanamarika vanim-potoana, hiampy ireo sanganasany faramparany i Tovo J’Hay mandritra izany. Fakana bahana amin’ny seho goavana ihany koa izany.